အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ၂၀၁၅ အတွက် .... ဘင်္ဂလီများနှင့် ပါတီနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း
၂၀၁၅ အတွက် .... ဘင်္ဂလီများနှင့် ပါတီနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ .. .
ဘယ်ပါတီတွေ နောက်ကျော ဓါးထိုးခံရမလဲ ..။
ဘယ်ပါတီတွေ ကိုးကွယ်မှု မှားမလဲ..။
ဘယ်သူတွေက ဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံနေတဲ့ ဇာတ်ကွက်ထဲ ကပြမှန်းမသိ ကပြနေရင်းနဲ့ ဘယ်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ကြံမှု ခံရမလဲ ..။
ရခိုင် ပါတီ နှစ်ရပ် (RNDP နဲ့ ALD) ပေါင်းစည်းဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တင်ထားတာ သုံးလကျော်ပြီး ဘာမှ အကြောင်းကြားချက်မရ မရသေးလို့ CEC ကိစ္စတွေ မစီစဉ်ရသေးတာ .. ..... သတင်းတွေ တက်လာပါတယ်..။
သယံဇာတခွဲဝေရေး ဆန္ဒခံယူပွဲ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေလည်း အာရုံပြောင်းတာ ခံနေရတယ်..။
ဒီကြားထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေက NDPD ပါတီ တစ်ခုတည်းကနေ ..Democracy and Human Right Party (DHRP) ပါတီ ဆိုတဲ့ ပါတီကို ၂၀၁၃ မှာ ထပ်ဖွဲ့စည်းတယ်...။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထပ်ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုခဲ့တယ်..။
အဲဒီထဲမှာ တချို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေက CEC စာရင်းကို ကော်မရှင်ကို တင်ပြရာမှာ လူမျိုး-ရိုဟင်ဂျာ လို့ရေးလာလို့ အဲဒီလူတွေကို ထုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပေမယ့် လူမျိုးနေရာမှ. blank ထားပြီး ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်..။
လက်ရှိ အဲဒီပါတီက .... ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပါပြီ ...။
ရခိုင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှာ .. ရခိုင်တွေအတွက် ...နေရာ ရဖို့ လွယ်ပါ့မလား..။
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်းပြချက်နဲ့ လက်ရှိ အာဏာရပါတီက ဘူးသီးတောင် မောင်တောက ဘင်္ဂလီမျီုးနွယ်စုတွေကို စည်းရုံးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်..။ လက်ရှိ ကြံ့ဖွတ်ရဲ့ အမာခံ အငြင်းပွားဖွယ် ဘင်္ဂလီလွှတ်တော်အမတ် (၃) ယောက်လည်း ကန့်ကွက်မှုတွေကြားထဲက ၂၀၁၅ အထိ နေရာပေးမယ်ဆိုတာ .သေချာသလောက်က ရှိနေပြီ ..။
ဒေါ်စုနဲ့ NLD ကို ဘာသာရေးအရ အထာက်အထားမဲ့ ရစရာရှိအောင် ပုတ်ခတ်ပြီး ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ပိုခိုင်မာအောင် ဖန်တီးနေတယ်..။ ခိုင်မာလာရင် အဲဒီ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ နဲ့ ပုဒ်မ ၈ အရ ဘယ်သူတွေ နိုင်ငံတော်အကျီုးစီးပွား ငှာ နိုင်ငံသားတွေ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်မလဲ..။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀(က) အရ
နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ (သို့မဟုတ်) ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ခြင်း
ဆိုတာကို ဘာ့ကြောင့် အစိုးရနဲ့ ကော်မရှင်က ၂၀၁၅ အထိ ပြန်မပြုပြင်သလဲ ..။.
အဲဒီလို ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာရင် .. အဲဒီပါတီတွေ အင်အားကောင်းလာရင် ...
ဒေါ်စုကို ခေါင်းတည် ဝေဖန်နေတဲ့ ရခိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ ..ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ..။
၂၀၁၅ မှာ ရခိုင်ပါတီတွေအတွက် ..ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး သော အတိုက်အခံဟာ ..
ဘယ်သူတွေဦးဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ ဘယ်ပါတီတွေလဲ ..ဆိုတာ .. မှန်းဆတတ်လောက်မှာပါ ..။
မိမိနောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ပဲ အထိုးခံရမလား ..။
မိမိခေါင်းကို sniper နဲ့ပဲ ..ချောင်းအပစ်ခံရမလား ဆိုတာကတော့ ...။
ခဲပစ်သူနောက်ကို .. ကမူးရှုးထိုး လိုက်နေသူများ ..။
ထစ်ကနဲရှိ ... ၀ုန်းကနဲ့ ..တုန့်ပြန်တတ်သူများ ...။